Ukuziqhenya kuyindlela ethakazelisayo futhi ethakazelisayo engakuthatha isikhathi eside kusihlwa. Ngosizo lokwazisa idijithali ukudala imisebenzi ehlukile ngempela. Kodwa uma ufuna ukugqoka okungewona ojwayelekile, ke umsebenzi wakho ukufunda ukuthi ungazihlanganisa kanjani. Okokuqala, ake sibheke indlela yokuxhumanisa i-cap elula.
Ukulungiselela ukugqoka izigqoko
Uma ufuna ukuqala ukudala isikhwama sasebusika, khona-ke udinga ukuthatha izintambo nokubopha izinaliti kuqala. Indwangu ingahluka: uboya, u-half-woolen, acrylic. Njengomthetho, ukhetho oluhle luhlanganiswa uhlamvu: i-acrylic kanye noboya.
Ngemuva kokuqoqa izintambo kudingeka ufunde ukuthi ungayifaka kanjani isigqoko ngezinaliti zokugaya, amaphethini alowo mkhonto angomagazini "Verena" no "Sabrina". Okhulumela kungaba yokhuni, insimbi, i-aluminium. Kwabaqalayo kuyinto elula kakhulu ukuhlanganiswa ngezinaliti zensimbi zokugaya, abanakho ukukhwabanisa, abaguqa noma abaphule.
Izinhlobo zamakhiloki ngesikhathi sokubopha
Uma uboya izigqoko, izinhlobo ezahlukene zokukhiya ziyasetshenziswa. Okubaluleke kunazo zonke yizo zobuso, okungukuthi, lapho okukhulunywe khona kuqhutshwa ngaphansi kwengxenyana yangaphambili ye-loop, futhi ngaleyo ndlela intambo isolulwe. Uma uhlanganisa i-purl loop, inaliti ithatha i-lobe yangemuva ukuze ilule intambo.
Eqinisweni, ukubopha kungenye indlela yokuhamba phambili nangemuva. Uhlobo oluthandwayo kakhulu lokubopha - i-band elastic - inguquko ye-front and back loops emgqeni owodwa. Lokhu kungukuthi, lokhu kuyisihluthulelo esisodwa nesinye ubuso, bese uphindaphinda. Kungase kube nokushintshaniswa kwe-purlins emibili ebusweni nambili, ama-purlins amathathu abuso nesithathu, njalonjalo. Uma unesithakazelo sokuthi ungagcwalisa kanjani isigqoko ngezinaliti zokunquma, khona-ke imidwebo ingomagazini.
Enye indlela evamile yokubopha - ubushelelezi bomzimba, ngakwesinye isandla kuphela izikhonkwane zobuso ziboshwe. Kodwa ubuso bendawo buhlukile ukuthi ingubo ingaba ingalingani.
Okuthandwa kakhulu yilokho okubizwa ngokuthi "ukugqama kwe-garter", okuvame ukuqinisekisa isendwangu esinekhanda. Ngalolu hlobo lokuxhuma, i-front ne-back loops ihamba emigqeni ehlukile. Okungukuthi, umugqa owodwa uboshwe ngamaconsi ebuso, omunye ulayini ukhonjiswe nge-purl, njalo njalo. Lolu hlobo alufaneleki nje kuphela ngezigqoko, kodwa ngama-sweaters, ama-vest, ama-scarves.
Ungakwazi ukubopha isigqoko nezinsimbi, kulokhu, imigqa yegamu ihamba njalo, futhi uthola iphethini enhle.
Ngaphambi kokubopha isigqoko ngezinaliti zokugaya, izifunda ezilula, okokuqala kudingeka uthathe izilinganiso. Lokhu kuyoba ivolumu yekhanda nokuphakama kwalo kusukela endlebeni kuya phezulu. Sabe sesibophe isampula emgqeni ofanayo, okuvela kuyo umkhiqizo omkhulu. Kuyinto encane, cishe ngamasentimitha ayishumi ngobukhulu. Khona-ke isampula kufanele ihlanzwe emanzini afudumele.
Khona-ke somile ezimweni zemvelo, futhi ngesisekelo salo, ukubalwa kwamalokhi kwenziwa ngokuqala kokubopha. Manje ungakwazi ukuthila ukuthi zingaki izitshudeni ozodinga ukuqala umsebenzi.
Ukujwayela izigqoko ezinhlangothini ezimbili zokudoba: iqoqo lezingodo
Ukwakha i-cap usebenzisa okhulumela ababili, uzodinga isikhathi esincane kakhulu. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo owenzayo uyoba ohlukile, futhi ufanelane nawe noma umuntu owubophayo.
Ukuze wenze i-cap enjalo, kufanele uthole amagremu angamakhulu ayisishiyagalombili wenhlamvu efanelekayo ngenani lezinaliti zokudoba, inaliti yeplastiki ene-eyelet enkulu (inaliti enjalo ishengiswa ngokugcwele ngezingubo zokugaya).
Ngemuva kokubopha isampula, sikhetha inani lezinsipho esiyidingayo, qala ukubopha nge-band elasinkibili ngamabili noma amathathu ngamathathu. Le bhanti ye-rubber izofanelana kahle nekhanda lakho. Kuyinto yokushintsha okufanako kwe-loops yangaphambili nangemuva.
I-cap elula enezikhulumi ezimbili
Ngakho-ke, i-gum iyaboshwa, futhi sesiqala ukucabanga ukuthi singagcina kanjani ukubopha inqola ngezinaliti zokubopha. Ungakwazi ukuqhubeka uhlangene nombuso wangaphambili ngemuva kokuphakama kwamasentimitha angu-3-4, futhi ngenxa yalokho, wenze i-rectangle ngokuphakama kwamasentimitha ayishumi nambili kuya kwangu-15, bese udonsa umkhawulo wendwangu ngentambo. Khona-ke uzoshiywa ukuxhuma izinhlangothi zegceke ngenaliti. Kuyadingeka ukuyixhuma ngomswakama. Umkhiqizo oqediwe ungahlanzwa, ukomiswe futhi uqhutshwe ngensimbi. Futhi manje sekuvele kucacile ukuthi ubopha kanjani i-cap elula.
Inguqulo eyinkimbinkimbi kakhulu ye-cap
Uma ufuna ikhanda lakho lihlale ekhanda lakho kangcono, udinga ukuqala ukuyihlanganisa emva kokuhlanganisa imigqa yokuqala nge-band elastic. Kudingekile ukwazi kahle ukuthi ungaphakamisa kanjani ikhanda ngezinaliti zokugaya.
Emgqeni wokugcina webhodi le-rubber, umuntu kufanele aqaphele eyodwa-yeshumi nambili ye-loop, kuqala nge-loop yesithupha. Ungafaka izintambo ezinemibala kulezi zindawo. Manje kuwo wonke umugqa wesibili, izikhiya ezimakwe ngalezi zintambo ziboshwe kanye nobuso obuseduze. Ekugcineni, udinga ukunquma ukuthi ungagcwalisa kanjani isigqoko ngezinaliti zokugaya. Ngenxa yalokho, kufanele ube nezinaliti eziyishumi zokubopha izinaliti zokubopha, uzoziqinisa ngomshini, ngenkathi ushiya ukuphela kwayo. Ukuxhuma emaphethelweni, udinga ukufaka intambo efanayo ukuthi ubophe umkhiqizo enaliti enesisindo esibucayi, ubese uhlanganise nabo. Awukwazi ukusebenzisa intambo yokuthunga, ngoba ngenxa yabo i-cap ngeke isule. Khona-ke uzofunda ukuthi uqedele kanjani ukugqoka izigqoko ngezinaliti zokugaya.
Muva nje, imfashini ihlanganisa ama-caps ane-pompon. Pom-pom - lesi yisisombululo esihle kakhulu sombuzo wokuthi ungaphakamisa kanjani i-cap nge-knitting izinaliti.
Ukwenza i-pompom, udinga imibuthano emibili yamakhadibhodi, ahlukaniswe ngezikhali. Umgodi wenziwa phakathi kwendilinga.
I-pom-pom ingakwazi ukushintsha i-curly, futhi ngenxa yalokhu kufanele uthathe indwangu etholakala ngenxa yokuqedwa kwezinto zangaphambili eziboshwe. Lokhu kuyoba yindlela enhle yokuqedela isigqoko ngezinaliti zokugaya.
Indwangu isilwe emibuthaneni yamakhadibhodi (kubalulekile ukuvuselela izendlalelo eziningi). Ngemuva kokuphefumula, intambo ihlukaniswe phakathi kwendilinga, ixhumana nabo - ivela pompom. Kuye kuyadingeka ukuthi unamathisele intambo ebude bama-25-30 amasentimitha. Kufanele uqede kanjani izigqoko zokubamba ngezinsimbi ezilula? Pompon!
Ukuthola izinaliti ezinhlanu zokubopha
Kumele ngithi i-cap, exhunywe yizikhulumi ezinhlanu, iyoba nenhle kakhulu kune-cap, exhunywe yi-two. Iphelele kubantu abathanda izinto ezingenazo izinto. Futhi kulula ukuhlanganiswa, ngoba akudingeki ucabange ngendlela yokwenza umgodi omuhle. Yiqiniso, kusadingeka uphule ikhanda lakho mayelana nokuqedela ukubeka isitokisi ngamasilandi wokugaya. Kodwa lizobukeka lihle kakhulu. Kusadingeka ukuthi uthathe isinqumo mayelana nempendulo yombuzo wendlela yokwenza i-zakochnit i-cap knit knitting.
Ngomsebenzi uzodinga okhulumela abahlanu abaneziphetho ezivulekile. Ekuqaleni kuzobonakala sengathi konke kunzima kakhulu. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, uzothanda ukubopha izinaliti ezinhlanu zokubopha, mhlawumbe uzoqala ukuzihlanganisa ngokuphelele.
Ukuze wenze konke okulungile, akudingeki ukwazi ukuthi ungaqala kanjani, kodwa futhi ukuthi ungagcwalisa kanjani isigqoko ngezinaliti zokubopha. Siqoqa ezimbili zombili izikhiya ezingamashumi amane, sibasabalalisa okhulwini abane ukuze ngamunye wabo abe nezinsimbi eziyishumi, sibopha nge-fifth knitting needle. Kumele kuqinisekiswe ukuthi okuthiwa izindlela, okusho izimbobo, azifaki phakathi kwabakhulumeli.
Ngakho-ke sihlangene nokuphakama kwamamentimitha angamashumi amabili namashumi amabili nanhlanu, bese siqala ukunciphisa loops. Emgqeni ngamunye wesibili, sithumela ubuso bomabili ndawonye, loops ngayinye eyishumi. Khona-ke kukhona izingodo eziyishumi, ezihunyushwe kwelinye zikhulunywe futhi ziqiniswe ngentambo. Yilokho konke. Ngenhla, ungakwazi futhi ukunamathisela i-pompon. Futhi-ke akudingeki ucabange ukuthi yini isigqoko esinayo ngezinaliti zokugaya, ukuthi ungayiqeda kanjani.
Ungayenza ngezinaliti ezintathu zokubopha, udwebe izingxenye zesine, kodwa lolu hlelo aluthandwa yiwo wonke umuntu. Uma ucabanga ukuthi ungafanelana kanjani nekhanda ngezinaliti zokugaya, ungayiqeda kanjani, ungafinyelela esiphethweni sokuthi kulula ukuhlanganiswa nezinaliti ezinhlanu zokubopha.
Izinhlobo zezigqoko ezisikiwe
Kunezinhlobo ezahlukene zezigqoko ezisikiwe, zenzelwe abantu abahlukene. Isibonelo, isikhumba se-beanie. It tightly round the head, ngokuvamile kuvumelaniswe ne band nokunwebeka kanye garter. Uma wenza umkhiqizo onjalo, awudingi ngisho nokucabangela ukuthi ungagcwalisa kanjani isigqoko ngezinaliti zokugaya, ngoba kulula. Izigqoko ezinjalo zazivame ukugqoka abantu abasebenza emisebenzini, abadinga imikhiqizo yokusebenza ngaphandle kwamafrills. Indlela yokuqeda i-cap nge-knitting izinaliti enephethini elithakazelisayo?
Isibonelo, isikhwama saseNorway ngokuvamile sinefomu elilula, kodwa linemihlobiso enhle. Le mikhombandlela ingabhekiselwa kumnikazi onolwazi. Uma usanda kuqala ukuhlanganiswa, kungcono ungayithathi. Phezulu uvame ukuba ne-pompon.
I-trump-trump ikhulu ngobukhulu, ngendlela efana ngayo nokugcina impahla lapho kukhona khona umgodi ebusweni. Le hat ngokuvamile igqoke frosts ezimbi, ngoba ihlanganisa entanyeni kahle. Yenza kube lula kunesiNorway, ngoba ungayenza ngokubopha nje ngokushintsha i-front and back loops.
I-Bere igcizelela ubufazi, kaningi kunezesekeli ezengeziwe kulo. Babevame ukubopha izinsimbi zabo zoboya.
Isikhwama ngokuvamile senzelwe izingane. Kungenziwa kufane nesimiso sezilwane. Ukungafani kwaleli cap kuyigala elide elihlanganisa izindlebe. Uma wenza lokhu, udinga ukucabanga ukuthi ungagqiba kanjani ukubopha inqola ngezinaliti zokubopha.
Izigqoko eziziwayo ziwusizo kakhulu, zigqoka kahle, kulula ukuzinakekela. Zithengwa kakhulu kunezikhumba zesikhumba, futhi kulula kakhulu ukuzikhiqiza ngokwazo. Bayokusiza ukuba ufudumeze ebusweni bebanda, uhlobise isithombe sakho.
Ungakwazi ukubopha isigqoko, isikhafu namagilavu kusuka emgqeni owodwa nangesitayela esisodwa, bese kubonakala ukuthi ukubonakala kwakho kuyoba umklamo wokuphakama. Futhi ukwakheka kwekhanda elinjalo kuzokulethela injabulo yangempela. Futhi kuyoba ngaphezu kokuzidla ubusuku obude, ikakhulukazi uma kubanda ngaphandle kwewindi. Into eyenziwe ngezandla zomuntu siqu ingumthombo wokuthula kwangaphakathi futhi into yokuziqhenya kwabanye. Ukukwazi into enjalo kuzokunika ithuba lokuthola izici ezintsha zobuntu bakho.
Ukuthola ngesandla kuyithuba lokudala imfashini nokuthonya ukuthuthukiswa kwayo. Lolu hlobo lwezinsizakalo alupheli nezefesheni, futhi ungakwazi njalo ukuthola isipiliyoni esibalulekile ngokubamba izinto ezidingekayo. Ukuzijwayeza futhi konke kuzoba kuhle. Ngemuva kwalokho, isidingo somzimba sizoletha injabulo nokuvumelana empilweni yakho.